Madaxweynaha Hirshabeele oo ka warbixiyay kulan uu maanta la yeeshay Ugaas Xasan (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweynaha Hirshabeele oo ka warbixiyay kulan uu maanta la yeeshay Ugaas Xasan (DHAGEYSO)
Madaxweynaha maamulka cusub ee Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo goordhaw shir jaraa’id ku qabtay magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa si faah-faahsan uga warbixiyay kulan hordhac ah uu gelinkii hore maanta halkaasi kula yeeshay Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Kulankaasi oo saxaafadda dibad-joog ka ahayd ayuu madaxweynaha Hirshabeele sheegay inuu kusoo dhamaaday mid is-afgarad ah, islamarkaana ay labada dhinac isla af-garteen waxyaabihii la isku soo hadal qaaday.
Wuxuu madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble tilmaamay in waxyaabihii kulankaasi looga hadlay uu ku saabsanaa khilaafkii iyo is-faham-waagii ka dhex taagnaa odayaasha reer Hiiraan, kaas oo salka ku haayay dhismaha maamulka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
“Ugaas Xasan waa Ugaaskayga, waana Ugaaskii beesha aa aniga ku abtirsado, si weyn oo qurux badan ayuu iisoo dhaweeyay, waan is aragnay, waan kulannay, waxaan kawada hadalnay wixii jira, waxkale ma uusan na dhihinee, wuxuu doonayay oo kaliya in dadka reer Hiiraan ay helaan xaqooda, wuxuuna ugu dambeyn igu yiri waxaan kaa sugeynaa waxqabad muuqdo” Sidaasi waxaa yiri madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Dhinaca kale, ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, kaas oo uu kaga hadlaayo kulankii maanta uu la yeeshay madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Ugu dambeyntii, warar hoose aynu ka heleyno magaalada B/weyne ayaa inoo sheegaya in madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble iyo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ay markale kulmi doonaan, inkastoo aan la ogeyn xilliga uu kulankaasi dhici doonno.